Bogga ugu weyn Sida Loo Bilaabo Meherad Fudud 2022: Hagaha Ugu Dambeeya, Tallaabo-tallaabo
Dhammaanteen waa inaan iska diiwaangelinaa naadiga jirdhiska. Ugu yaraan sidaas, waxaan hubnaa inaan caafimaad ahaan u sii socon doonno oo aan sii noolaan doonno. Xaddidnaantayada kaliya ayaa ah, ma jiraan naadiyo jirdhis oo ku filan oo dhammaanteen na kaxeeya. Sidaa awgeed, welwelkayagu waa inuu noqdaa sida loo bilaabo jirdhiska ganacsi, sidaa darteed ma aha inaan ka walwalno halka aan ku habboonaan lahayn.
Caalamka, Mareykanka ayaa ah suuqa ugu weyn ee leh xubnaha ugu badan ee caafimaadka & taam naadiyada iyo dakhliga. Hase yeeshee, kuwa la heli karo ma wada qaadan karaan. Sida laga soo xigtay Statista; caalamka taam iyo naadiga caafimaadka warshadaha soo saara dakhli ka badan 100 bilyan oo doollarka Maraykanka ah sannadkii.
Xisaabinta isku dhafnaanta bilaabidda iyo maaraynta meherad waxay noqon kartaa dhammaan niyad -jabka aad u baahan doonto si aadan waxba uga qaban a fikradda ganacsi ee mustaqbalka. Si kastaba ha ahaatee marna ma aha sida herculean sida aan inta badan aragno haddii qof uun na tuso, “sidee.”
Hadda, halkan, ii oggolow inaan noqdo Masiixa 'qof'. Ii oggolow inaan ku tuso sida loo bilaabo, loo maareeyo iyo ka faa'iidayso jirdhiskaaga ganacsi inta aad buuxinayso baahida jirdhiska ee malaayiin qof.
Marka xigta, ha iloobin in dheecaankan ballan -qaadka ah laga soo ururin karo oo keliya akhrinta qormadan. Haddaba? Hore u bilow.
Lahaanshaha meheraddaadu waa wax cusub oo ku cusub abuurista maalka. Dhab ahaantii waa mid ka mid ah ilaha ugu wanaagsan ee durdurro badan oo dakhli ah oo aad hore u maqashay dhowr jeer.
Waxyaabaha ayaa ah, lahaanshaha meheraddu waa hal shay, laakiin maareynta iyo sameynta guusha marka la eego waa wax gebi ahaanba ka duwan. Si kastaba ha ahaatee, ogaanshaha sida loo bilaabo, loo maareeyo loona maareeyo meheraddaada ayaa hab -socodka ka dhigaysa socod -socod.
Sidee faa'iido u tahay warshadaha jirdhiska?
Sida ku xusan Jeff, IHRSA (Caafimaadka Caalamiga ah, Ururka Racquet & Sportsclub Association) $ 30 bilyan oo warshadaha caafimaadka iyo jirdhiska ah ayaa ku soo kordhayay ugu yaraan 3 - 4% sanadkiiba tobankii sano ee la soo dhaafay mana muujinayaan wax calaamado ah oo hoos u dhigaya waqti dhow.
Sidoo kale, Jeff wuxuu sheegayaa in hadda, qiyaastii 20% dadka waaweyn ee Mareykanka ay leeyihiin xubinnimada naadiga jirdhiska. Caalamka waxaa jira in ka badan 180,000 naadiyo jirdhis, oo lagu qiyaasay inay kasbadeen $ 84 bilyan xubnahooda 145 milyan.
Waxaa ammaan mudan, tirakoobyadan ka dhex jira tiro kale oo badan waxay muujinayaan in warshadaha jirdhiska ay tahay fikrad ganacsi oo faa'iido leh oo la tixgeliyo. Tani waa mid si fudud loo fahmi karo; jimicsiga oo ah qaab ilaalin ku habboon ayaa helaya aqbalaad iyo caannimo badan.
Sidaas awgeed, tani waxay aragtay dad badan oo doorta dariiqa nabdoon si ay caafimaad ugu noolaadaan dad badana waxay ku biiri doonaan tareenka mustaqbalka dhow. Si dhakhso ah oo ku filan, jimicsiga ayaa laga yaabaa inuu yahay habka kaliya ee lagu caafimaad qabo. Tani waa inay adiga kuu ahaato war weyn.
Marka, waa inaad runtii tixgelisaa inaad bilowdo ganacsigaaga jirdhiska! Waa iska cadahay fikradda ganacsigu inay tahay ubax-ubax.
Miyaan ka bilaabi karaa meheraddayda jirdhiska guriga?
Dabcan, waad awoodaa! Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa inaad raacdo tallaabooyinkan tooska ah si aad uga bilowdo meheraddaada jirdhiska gurigaaga.
Aqoonso Suuqa Bartilmaameedkaaga
Sharciyeynta fikraddaada ganacsi
Bilow barta jirdhiska; Ka qaybgal baraha bulshada.
Bilow Blog Fitness
Istaraatiijiyad ku samee fiidiyowyada
Intee in le'eg ayay ku kacaysaa in la bilaabo ganacsi taam?
Bilaabidda meherad taam ah waxay kugu kici kartaa mid aad u hooseeya sida aad gurigaaga uga bilaabi lahayd, ilaa $ 50,000 oo ah xarun miisaaniyad ilaa in ka badan $ 1,000,000 oo loogu talagalay jimicsiga weyn ee jimicsiga oo leh dhammaan adeegyada.
Jimicsi istuudiyaha oo suubban ku kici karto $ 65,000, halka jimicsiga dhex-dhexaadka ah uu ku kici karo $ 115,000. Sidoo kale, istuudiyaha baaskiilka fudud wuxuu ku tagi karaa $ 50,000.00 iwm.
Waxaan rumeysanahay in qodobka ay tahay inaad ogaato inuu yahay in qiimaha lagu bilaabo ganacsiga jirdhiska uu ku kala duwan yahay adduunka oo dhan; si weyn u saameeyay goobta, qiimaha wax soo saarka, iyo tiro kale oo badan iwm.
Sidaa awgeed, jadwalka hoose wuxuu ku siinayaa fikrad ah kharashyo kala duwan oo socodsiinta xarunta jirdhiska u baahan karto;
Kharashyada hal mar Kharashyada soo noqnoqda oo socda
Goob jireed –Waxaad si fudud ku bixin kartaa ilaa $ 800,000 haddii aad rabto inaad si toos ah u yeelato booska. Si kastaba ha ahaatee, xusuusnow inaad samayso baadhitaan isbarbardhig oo qoto dheer oo ku saabsan meelaha ganacsiga ee aagga aad rabto. Caymiska - $ 12,000 oo ah khidmadaha la bilaabayo waa in la hayaa oo la bixiyaa sannad walba, markaa hubso inaad ku darto kharashyada miisaaniyadda ee socda.
Qalabka jimicsiga -meel u dhaxaysa $ 10,000 oo loogu talagalay istuudiyaha shaqsiyeed illaa $ 50,000 oo loogu talagalay jimicsi ganacsi oo si buuxda u qalabaysan. Hubi inaad dukaameysato — oo maskaxda ku hay inta badan waxaad heli kartaa qiimo -dhimis haddii aad qalabka ku soo iibsato xirmo ahaan xirmo dhammaystiran. Oggolaanshaha - ruqsadaha u hoggaansamida badiyaa waxay leeyihiin khidmadaha cusboonaysiinta. Hubi inaad ka hubiso deegaankaaga wixii khaas ah.
Shahaadda - haysashada shaqaale xirfad leh, shahaado haysta waa wax weyn oo lagu daray. Aqoonsiga tababarayaasha shaqsiyeed waxay ka koobnaan karaan $ 500 ilaa $ 800 shahaado kasta. Lacagaha ijaarka qalabka –Qiimaha celcelis ahaan wuxuu u dhexeeyaa $ 3,934 ilaa $ 8,067, laakiin taasi way kala duwanaan doontaa iyadoo ku xiran nooca iyo inta gogo 'ee qalabka aad kireysaneyso.
Ruqsadaha iyo ruqsadaha - fiiri ruqsadda ganacsiga iyo wixii oggolaansho u hoggaansamida caafimaadka iyo badbaadada. Kharashyadu way ku kala duwanaan doonaan guud ahaan guddiga, laakiin maskaxda ku hay in shatiyada habboon iyo oggolaanshaha loo baahan yahay. Utilities - qolka jimicsiga wuxuu isticmaalaa koronto aad u badan, gaar ahaan haddii ay furan tahay 24 saac maalintii. Hawlgalada baaxadda leh waxay bixiyaan celcelis ahaan $ 63,465 ilaa $ 68,413 sanadkii.
Lacagaha sharci iyo ka baaraandegidda - Waxaad bixin kartaa ku dhawaad ​​$ 200 saacaddii si aad uga hesho caawimaad xirfadeed gorgortanka heshiiskaaga, xiritaanka iibinta guriga, ama aad ku dhex mariso ruqsadaha iyo oggolaanshaha lagama maarmaanka u ah jimicsigaaga. Qiyaasta shaqada ee $ 9,000 waa inay samaysaa. Dayactirka iyo dayactirka qalabka –Tani waxay kugu kici kartaa $ 25,040 sanadkii.
Caymiska - Filo inaad haysato ku dhawaad ​​$ 12,000 oo ah khidmadaha si aad u bilowdo, in kasta oo qiimayaashu ku kala duwanaan doonaan iyada oo ku saleysan arrimo kala duwan (sida xaaladaha xayeysiinta). Nadiifinta sahay –Waxaad filaysaa celcelis ahaan $ 150 hawlgallada yaryar. Jimicsiyada waaweyn waxay ku kici karaan $ 12,609 ilaa $ 29,980 sanadkii.
Shabakadda kombiyuutarka iyo nidaamka POS -waxaad u baahan doontaa $ 550 illaa $ 2,300 sanadkiiba iyo caadiyan laba jeer lacagtaas si aad u bilowdo inaad ku samaysato shabakad Internet ah iyo nidaam dhibic-iib ah si aad u aqbasho qaababka casriga ah ee lacag-bixinta, iyo sidoo kale softiweerka maareynta jimicsiga habboon si aad u hubiso inay wax u socdaan habsami leh. Dayactirka HVAC - Qiimaha celcelis ahaan waa $ 500 sanadkii si loogu sameeyo dayactirka joogtada ah.
calaamado - Calaamadaha jimicsiga oo habboon ayaa lagu bixin karaa ugu yaraan $ 20, in kastoo aad si sahal ah ku bixin karto wax ka badan. Adeegga telefoonka iyo internetka -macaamiishaadu waxay qiimeyn doonaan Wi-Fi bilaash ah. Filo inaad ku qarashgareyso $ 75 bishii, ama $ 900 sanadkiiba halkan.
Qalabka jimicsiga ee kala duwan - Filo qiyaastii $ 500 si loo sameeyo. Canshuurta mushahar bixinta ama canshuuraha iskaa u shaqeysiga –Xasuusnow inta badan waxay u baahan yihiin in la siiyo saddexdii biloodba mar. Haddii ay khuseyso, canshuuraha iskaa-u-shaqeysigu wuxuu noqon doonaa qiyaastii 7.6% dakhliga shaqsiyeed.
advertising - waxaad rabtaa inaad ku dhawaaqdo imaatinkaaga si aad u soo jiidato macaamiisha mustaqbalka. Waxaad ku bixin kartaa $ 5,000 Ujrada kaararka deynta - Heerarka warshadaha caadiga ah ee macaamil dhaqidda waa inaysan ka badnaan 3.25% xagga sare, markaa ka adeego adeeg bixiyahaaga. Waa inaad sidoo kale tixgelisaa khidmadaha u -hoggaansanaanta PCI ee khasabka ah, oo sida caadiga ah ka bilowda $ 5 bishii.
Websaydh waxqabad leh - ganacsi kasta oo casri ah wuxuu u baahan yahay joogitaanka webka. Filo inaad bixiso $ 300 ilaa $ 700 dhismaha hore. Lacagaha sharciga iyo xirfadda - maanka ku hay in adeegyada mihnadlaha ah, sida xisaabinta ama sharciga, sida caadiga ah ay socdaan qiyaastii $ 200 saacaddii.
Kaashka hawlgalka - waxaad u baahan doontaa xoogaa raasamaal shaqo iyo kayd lacag caddaan ah oo loogu talagalay hawlgallada ganacsiga caadiga ah. Waxaan soo jeedineynaa in gacanta lagu hayo ugu yaraan $ 1,000 Kharashaadka kala duwan - Had iyo jeer waa fikrad caqli -gal ah in miisaaniyada qaarkood loo qoondeeyo kharashyada kala duwan. Waxaan soo jeedineynaa ugu yaraan $ 1,000 bishiiba.
Sida Loo Bilaabo Ganacsi Jirdhis
Sida Loo Bilaabo Meherad Fudud 2022; Hagaha talaabada Tallaabada
Waa muhiim inaad ogaato taas ikhtiyaarada ganacsi ee jirdhiska kala duwan ayaa diyaar u ah ganacsadaha taam ahaanta ee damacsan. Markaa, waxaad go'aansan kartaa inaad ku biirto mid ka mid ah kuwan soo socda;
Bilow Fasalka Zumba
Noqo Dhakhtarka Jirka
Noqo Tababare Shaqsiyeed
Bilow Fasalka Spin
Ka fikir inaad furato Naadiga Orodka ama Socodka
Bilow Jimicsiga Awoodda leh
Bilow Blog Fayoqabka
Fur Studio Yoga ah
Bilow Studio Qoob -ka -ciyaarka
Sidoo kale, ha iloobin inaad mid kale dooran karto haddii hal ikhtiyaar uu u muuqdo mid niyad jab leh. Waxa ugu muhiimsan ayaa ah inaad ku raaxaysato waxaad samaynayso oo aad macaash doonayso.
Tani waa la aasaasay, bal aan eegno noocyo kala duwan la aasaasay tillaabooyinka aad shaqaalaysiin karto si aad u bilowdo ganacsi taam oo adiga kuu gaar ah;
1. Samee Qorshe Ganacsi
Sida kooban u sharaxay Fudud, "Qorshe ganacsi oo faahfaahsan waa buundo isku xirta xiisahaaga shaqsiyeed iyo xirfaddaada faa'iidada leh."
Dukumeentigu wuxuu awood kuu siinayaa inaad sawirto qorshaha aasaasiga ah ee fikradda ganacsiga, hoos u dhig qorshaha oo aad diirada saarto.
qorshahaaga ganacsi waa inuu tixgeliyaa waxyaalahan soo socda tixgelin faahfaahsan; soo koobidda fulinta, sharraxaadda shirkadda, qorshaha maaliyadeed, iyo falanqaynta suuqa. Hubi inaad ogtahay waxay ku lug leeyihiin oo fadlan, ku sii wad koorsada.
2. Aqoonso Suuqa Bartilmaameedkaaga
Talo ahaan, ha ku qaadin kororka warshadaha jirdhiska. Waa run in dad aad u fara badan ay diiradda saarayaan sidii ay ugu habboonaan lahaayeen goobaha jimicsiga, hase yeeshee, qof walba kuma imaan karo. Haddaba? yaad beegsanaysaa?
Dhalinyaro? Carruur? Ardayda? Dadka waayeelka ah? Haweenka uurka leh? Dadka waaweyn oo lagu daray? Carruurta la isku qasay? Yaa dhab ahaan? Markaad hoos u dhigi karto 'yaa', dhagaystayaashaada bartilmaameedka ah ayaa la aqoonsan lahaa taasina waa tallaabo weyn oo kaamil ah.
3. Sharciyeynta fikraddaada ganacsi
Hel magac ganacsi oo rasmi ah isla markaana isku diiwaangeli, tani waa lama huraan Awood kasta waxay leedahay shuruud sharci oo ku wajahan meheradaha la soo jeediyay.
Ha iska indha tirin, xitaa haddii ujeeddadaadu tahay inaad meheraddaada ka bilowdo guriga, waxaa muhiim ah inaad fuliso dalabka sharciga si aad u hesho hawl maalmeed aan dhib lahayn oo ah ganacsigaaga la soo jeediyay.
4. Abuur joogitaan xoog leh oo onlayn ah adigoo adeegsanaya warbaahinta bulshada.
Haddii ujeedadu tahay in lagu maamulo naadi jirdhis oo lacag la'aan ah guriga ama in la furo xarun jimicsi oo casri ah, warbaahinta bulshada ayaa kuu oggolaan doonta inaad gaarto dhagaystayaashaada dhaqso iyo jaban.
Waxay abuuri doontaa joogitaan laga yaabo inaadan helin sanadka soo socda ee ganacsigaaga jirdhiska.
Haddii aad doonayso inaad ku bixiso barnaamijyo tababarayaal shaqsiyeed oo onlayn ah, sidee ayaad u suuqgeyn doontaa adeegyadaada oo aad u bixin doontaa jimicsiyada? Miyaad iibin doontaa barnaamijyo ma guurto ah ama ma u fidin doontaa tababare adeeg internet ah? Ikhtiyaar kale ayaa ah in lagu bixiyo tababbarka tooska ah barnaamijyada sida FaceTime, Zoom, ama Facebook Live.
Kira Stokes, oo ah Tababaraha Shakhsi ahaaneed ee Shahaadada NASM ee Magaalada New York, ayaa bara fasallada nool waxayna la shaqaysaa macaamiisha shaqsi ahaan. Waxay kaloo u xuubsiibtay inay bixiso barnaamij guul leh oo ku saleysan 'Habka Joogtada ah' kaas oo gaara kumanaan qof bishii, marka lagu daro tababarka macaamiisha khadka tooska ah iyada oo loo marayo shirarka fiidiyaha.
Ujeedadu waxay tahay in farsamadu ay hadda u suurtogelisay tababarayaasha shaqsiyeed inay u fidiyaan xalalka jirdhiska macaamiisha meel kasta oo adduunka ah ilaa iyo inta ay leeyihiin xiriir internet oo xawaare sare leh iyo meel ay ku jimicsadaan. Sida ganacsi kasta oo kale, waxaa jira fursad aad u weyn tababbarka onlaynka ah, laakiin waqti bay qaadan doontaa in lagu guulaysto.
Haddaba? Ujeedadaydu waxay tahay, warbaahinta bulshada waa la heli karaa oo waa bilaash, Adeegso!
5. Bilow Blog Fitness ah
Tixgeli socodsiinta baloogga jirdhiska; dadku waxay si fudud isugu dayi karaan in waqtigooda firaaqada ah iyo meesha ay iyaga ugu shaqayso, waxay si fudud ugu saxeexi doonaan meheraddaada macmiil ahaan.
Blog -gu wuxuu kaa dhigayaa awood aakhirka. Marka dadku marin u helaan fikradahaaga onlayn, ku qancinta inay kugu soo biiraan waxay noqon doontaa socod---baarkinka
Halkan waxaa ah muunad bilaash ah qalab lagu caawiyo dhis joogitaankaaga internetka.
6. Istaraatiijiyad ku samee fiidiyowyada
Fiidiyowyadu waa wax la mid ah inaad naftaada halkaas iska dhigto. Qaado fiidiyowyo dhowr ah adiga oo sameynaya dhowr jimicsi jimicsi oo ku dheji dhammaan gacmaha warbaahinta bulshada.
Xeeladdu waa inay ahaato mid joogto ah oo ula kac ah. Markaa xasuuso inaad lacag ku shubto xoogga saamaynta warbaahinta bulshada.
Hagaag, haddii aad joogto u ahaato oo aad xoogga saarto waxaad samayso, goor dhow ama goor dambe, waxaad ka mid noqon doontaa kuwa saamaynta leh.
7. KA BAX XAQIIQDA
Markaad xoqayso xaruntaada halkan waxaa ah 4 su'aalood oo waxtar leh oo ay tahay inaad tixgeliso weydiinta ka hor intaadan go'aan gaarin. Kaliya ka dib marka aad miisaamto jawaabaha suurtagalka ah ee su'aalahan waa inaad doorataa xarun.
Haddii aad go'aansato inaad ku shaqaysato qandaraasle ahaan, meesha aad kirada ka bixinayso meel ka mid ah xarunta, noocee taageero ah, haddii ay jirto, ayaa xaruntu bixin doontaa?
Ma heli doontaa fursad aad kula kulanto xubnaha cusub ee xarunta?
Miyaad awoodi doontaa inaad codsato xubnaha jira, mise waxaa lagaa doonayaa inaad samayso suuqgeyntaada si aad macaamiisha u soo geliso?
Sidee loo maamulaa xarunta? Waxay noqon kartaa meel caan ah oo lagu shaqeeyo. Weli, haddii aan si xirfadaysan loo maareeyn, waxaa laga yaabaa inaad doonaysid inaad tixgeliso inay mudan tahay waqtigaaga si loo abuuro xiriir ganacsi oo rasmi ah.
8. KU HELI QALABKA SAXDA AH
Laga soo bilaabo kubbadaha daawada iska caabbinta caagga ah ee kettlebells -ka ilaa dumbbells la hagaajin karo, waxaa jira dhowr ikhtiyaar. Miisaaniyaddaada iyo awoodda aad ugu geyso meelaha aad ku arki doonto macaamiisha ayaa kaa caawin doonta go'aaminta qalabka ugu fiican ee ku habboon baahiyahaaga.
Haddii aad doonayso inaad jimicsi ku siiso baarkinka, hubi inaad ka hubiso waaxda baarkinka deegaanka si aad u ogaato haddii loo baahan yahay oggolaansho.
Tusaale ahaan, magaalada San Diego, waa caadi in hal ama laba qof lagu tababaro beerta ay magaaladu maamusho. Wali, kooxaha ka weyn cabbirka afarta waxay u baahan yihiin oggolaansho ay bixisay maamulka baarkinku (oo u baahan lahaanshaha caymiska mas'uuliyadda habboon).
Graham King, oo ah milkiilaha Urban Fitness ee Washington, DC, wuxuu bilaabay meheraddiisa isagoo jimicsi ku bixinaya beerta nasashada wuxuuna koray inuu yeesho saddex goobood. Sida Mr. King uu muujiyo, jimicsiga baarkinku wuxuu noqon karaa ikhtiyaar aad u fiican oo lagu bilaabi karo boqortooyo jirdhis, laakiin waxaad rabtaa inaad hubiso inaad si sax ah u samayso.
9. ABUUR CALAN
Markaad garato bartilmaameedka dadka, sideed ula xiriiri doontaa dadkaas si ay u fahmaan faa'iidooyinka adeegyada jirdhiskaaga? Suuqgeynta waa summad, summadduna waa suuqgeyn; samaynta aqoonsi astaan ​​ayaa kaa caawin kara inaad la xiriirto macaamiisha iman karta.
Markaad ka fikirto unugyo ama faashado dhejis ah, magacyada sumadda sida Kleenex ama Band-Aid waxay u muuqdaan inay isla markiiba madaxaaga ku soo boodaan. Tan waxaa loogu yeeraa aqoonsiga astaanta 'maanka sare' waana awoodda kobcinta aqoonsi summad la garan karo.
Ms. Stokes waxay adeegsatay ku -habboonaanta magaceeda dambe si ay u dhisto 'Habka Joogtada ah,' oo ah summad isla markiiba la garan karo oo horumar xooggan ka samaysay barnaamijyadeeda tababarka iyo adeegyada tababarka.
19. HABKA BIXINTA BAARISTA
Haddii aad bixiso adeegyo toos ah ama onlayn ah, sidee ayay macaamiishaadu kuugu bixin doonaan waqtigaaga ama barnaamijyada aad iibiso? Sida tikniyoolajiyaddu u suurtogelisay in la gaaro macaamiisha meel kasta oo adduunka ah, waxaa lagama maarmaan noqon doonta in la baaro hababka lacag -bixinta.
Waxaad ku bilaabi kartaa koonto PayPal, Venmo, Square, ama adeeg kasta oo kale si aad u hubiso in si ku filan loogu magdhabayo waqtigaaga iyo dadaalkaaga.
Wax badan baa bilaabaya ganacsi jirdhis. Ma jiro wax dammaanad qaad ah oo ah guusha, laakiin haddii aad mashquulsan tahay, shaqada geli, oo aad sagaalkan tallaabo fuliso, markaa waxaad si fiican ugu sii socon doontaa mustaqbal dheer, abaal -marin leh oo laga yaabo inuu noqdo mid aad u faa'iido badan sida xirfadle jimicsi.
11. Gunaanad: Bilow Hore
Arag balakoonka gurigaaga hortiisa ama meesha aad wax ku xirto? Waxaad u beddeli kartaa goobtaada tababarka-jirdhiska.
Waxaad ku bilaabi kartaa fasallada yoga iyo acrabatics Zumba. Xamaasadda iyo joogtaynta aad ku hayso fikraddan ayaa u soo saari doonta natiijooyin macaamiishaada ugu horreysa oo keeni doonta inta kale ee macaamiishaada.
Kaliya xasuuso 2 shay; Hore u bilow oo ha niyad jabin marka natiijooyinku aysan isla markiiba imaan.
Si tartiib ah laakiin joogto ah ayaa kuu keeni karta dhammaan macaamiisha balaayiinta doolar ah ee ganacsigaagu u qoondeeyay inuu yeesho.
Sida Loo Bilaabo Meherad Massachusetts: Tusaha Ugu Dambeeya, Tallaabo-tallaabo
Sida Loo Bilaabo Ganacsi Nadiifin Qalalan: Hagaha Ugu Dambeeya, Tallaabo-Talaabo ah
25+ Ganacsiyada Yaryar ee ugu Faa'iidada badan| Talo-yaqaan
Sida Minnesota Ganacsi Looga Bilaabo: Tusaha Ugu Dambeeya, Tallaabo-Talaabo ah
Sida Loo Bilaabo Meherad ku taal Arizona: Tusaha ugu dambeeya, Tallaabo-tallaabo
200+ Fikradaha Ganacsi ee Online -ka ah oo kaa dhigi kara Hanti
25ka ugu sarreeya Fikradaha Ganacsiga Adeegyada
Sida Ganacsi Looga Bilaabo Ohio: Hagaha Tallaabo-tallaabo
Ma ogtahay in shatiga ganacsigaagu uu ilaalinayo ganacsigaaga oo uu sidoo kale keenayo faa'iido badan? Lahaanshaha…